Inkonzo egqwesileyo- I-AOOD Technology limited
I-AOOD izama ukubonelela ngeyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi bethu. Sithatha inxaxheba ekuthatheni inxaxheba kwinqanaba lokuqala lokuyila kwabaxumi bethu, siqwalasele ngokupheleleyo iinkqubo ezahlukeneyo zendlela kunye namandla ombane, indawo, ufakelo, okusingqongileyo kunye neemfuno zomsebenzi, ukubanika iingcebiso zobungcali kunye nokubanceda ukuba bafumane isisombululo esibonakalayo esijikelezayo - isiliphu.
Ukuphendula ngokukhawuleza yimfuno esisiseko kumthengisi ngamnye we-AOOD. Sigcina ukubakho kwe-24/7 kubathengi bethu kwaye siqinisekisa ukuba imibuzo / iimfuno zabo zinokusonjululwa ngexesha elifutshane. Xa kukho ukulibaziseka ekwenzeni, sigcina abathengi bethu benolwazi kwangexesha.
Sinewaranti elungileyo kunye nomgaqo-nkqubo wentengiso emva kokuqinisekisa ukuba imiba engalindelekanga ingasombululwa ngokukhawuleza. Ixabiso elifanelekileyo, umgangatho ophezulu kunye nenkonzo ehambelanayo yile nto i-AOOD eya kuyinika abathengi bethu.